Ogaden News Agency (ONA) – Gubbo keen, Gidhaaj U dhaqaaq, Gibir Bixi, Gan-Game U soo bax & Gabankaaga Soo qabo; Gayigay Kajirtaa Soo Ogadenya maha? Qore : Rooble Maxamed
Gubbo keen, Gidhaaj U dhaqaaq, Gibir Bixi, Gan-Game U soo bax & Gabankaaga Soo qabo; Gayigay Kajirtaa Soo Ogadenya maha? Qore : Rooble Maxamed
Sidaan Lawada socono Waxaa kajira Gayiga Ogadenia Dhibaatooyin aad u fara badan oo isugu jira Dil, Tacadi, Kufsi, Xabsi danbi la’aan ah & nolol cidhiidhi ah. Waxaa kale oo ka jira Dhibaatooyinkaas aan kor kuxusay oo iyagu ah waxyaabaha aan ubaahnayn markhaatiyada. Dhibaatooyinka haysta dadka shacabka ah een waxba galabsan waxaa ka mid ah;
GUBBO keen: waa waxyaabaha oogu badan ee Shacabka Ogadenia een waxba galabsan loogu goodiyo markii loo taxaabo Xabsiyo aysan mutaysan danbigoodana aysan galin. Waxaad Arkaysaa Hooyo, Gabadh (Ugub) Gabban & Gadh cadaa oo ah dadkay bulshadu ku dhisantahay oo lagu xidhayo danbi aan lahayn Markhaati sal & Raad midnaba. Waxaaba Kasii xanuun badan Adigoonba danbi lahayn kusii jir xabsiga taasoo ka dhigan maah-maah Soomaalidii ahayd; Cidna uma Maqna, Ceella uma Qodna, midaas oo aysan jirin Maxkamad xukunta Muwaadinka/Muwaadinada Qalad & Sax Intaba. Waxaa marag madoonta ah in Dadkaas lagu xidho inay bixiyaan Gubbo Heer Lacageed ah kadibna ay u sheegaan in lasii dayn doono. Akhristoow markaad u fiirsato arintan GUBBO ma is-tidhi Xukunka Lacagta ah Ayaa Kahoreeya Midkii Xabsiga ahaa ee Qofka loo soo xidhay? Ka gudub, Lacagtaas ma awoodo Qofka Ogadenia kunool oo markii horeba haysan fursad Dhaqaale & Dawlad Daryeesha midnaba. Waxaad arkaysaa Qofkii oo loosoo raadinayo ehelada & Qaraabadii u joogtay Qurbaha kadibna u dirayaan Lacagtii Gubbada ahayd. Maba xumaateen hadii dhibku sidaas kugu dayne Waa wado ku soo gashay, waana hubaal in Barri hadana xabsiga Lagugusoo celin. Gayigay Taasi Kajirtaa Saw Ogadenia maha? Gardarro & Guumaysi.
GIDHAAJ: Waa erayada uu Guumaysigu ku abuuray Dhulka Ogadenia, macnaheeduna yahay Qabo oo Xoog ku Kaxee. Haday diidaana Garaac Gadhigana Ka qaado. Waxaa kajira Ogadenia dad shacab ah oo xoogsada, una rakaabsada Gobolada & Dagmooyinka Ogadenia, walloow uusan maanta kajirin Gaadhi Kaligii bixi kara qasabna looga dhigay in laxayiro Shacabka Ogadenia, illaa ay u yimaadaan waxay ugu yeedhaan, Ajaabi oo macnaheedu yahay Ciidanka Ethiopia & Hawaarinta oo sii kaxeeya. Kagudub, Waxaan indhahayga ku arkay Gaadhi socday maalin & badh, oo ay Ciidamada Guumaysigu intay ka daadiyaan dadkii saarnaa ku qasbayaan darawalka Inuu geeyo meeshay iyagu rabaan, midaas oo kuu cadayn inaysan jirin cabsi & kala danbayn loogu aaba yeelayo shacabka Ogadenia. Iyagoo Ciil, Murugo & Xanuun hoosta kala tiicayana ku samrayaan, Sugayana Dheeftooda. Mahaystaan cid ay ooga dacwoodaan sababtoo ah kuwan iyo kuwaa waa dameer & Labadiisa Dhagood. Su’aasha iswaydiinta mudan waxay tahay away Gaadiidkii loogu talo galay Ciidanka Guumaysigu inay isticmaalaan? Dawladu ma waxay khasabtaa Shacabka masaakiinta ah ee ay ku sameeyeen Cunaqabaynta? Qofkii Caqli Saliim ah Alle kumanaystay wuu garan Jawaabta. Gayigay Taasi Kajirtaa Saw Ogadenia maha? Guumaysi & Gardarro.
GIBBIR: Ogadenia waxaa kajira Dhibaaatooyin ay kamid yihiin, in Dhulkii aad adigu lahayd Lagaaga qaado Gibir (Canshuur) oo ay ukala Qaybiyeen laba nooc; Hadii bootadaada ama Dhulka ay Guryo Ka dhisanyihiin waxaad bixinaysaa Lacag aad u badan, hadii dhul banaan aad leedahayna sidoo kale iyagoo oogu sheekeeya Shacabka Biri magaydada ah ee Ogadenia waxaa lagu fulinayaa Horumarka socda. Maxa la horumarin hadiiba aysan jirin Fursad Dhaqaale oy haystaan Shacabka la dulmay. Garaadka saxdi ahi magaran waayee, ma Qof waxaad aragtay Gayigii awoow ka awoow uu ku noolaa Laga qaadi Gibbir oo Macnihiisu yahay, Dhulkan ayaan kaa gadan aad adigu leedahay! Gibbirku maha shay ku cusub Ogadenia ee waa mid soo jireen ahaa oo Somaalida Ogadenia ka dagaashay, Kana diiday Abyssinia Qarniyo kahor, Maantana ay JWXO hubka u qaaday. 1915 Ayaa waxaa ka dhiidhiyay oo kula dagaalamay Ninkii la oodhan jiray Ras-Mokenan Ugaas Cumar Ugaas Alle ha unaxariistee. Dagaalkaas oo lagu macaabo “Dagaalkii Gibir Diid”. Waana Arrinta ilaa & Maanta Lagula dhaqmayo Dadka reer Ogadenia. Gayigay Taasi Kajirtaa Saw Ogadenia maha? Gardarro & Guumaysi.
GANGAME: Macnaheedu waa khasab kusoo bax Khasabna Naftaada kaga been sheeg. Waxaa kajira Ogadenia Maalmo Shacabka Si xoog ah la’ isugu keeno kadibna ay u isticmaalaan Erayga Ah “ISFASHILI” oo ah waligaa ma aragtay ama ma caawisay Ciidanka Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia? Midaas oo ku cadaynaysa Xidhiidhka iyo Is jacaylka kadhaxeeya Shacabka & Xaq u dirirka JWXO. Kadibna Si hanjabaad iyo bahdil ah (Humiliation) Qofka looga keenayo inuu hafro Naftiisa isagoo leh Haa waan Caawiyay. Hadii uusan sidaa dhina loo keeni mid markhaati beenaale ku fura. Haduu naftiisa hafro iyo hadii kaleba waxaa Loo taxaabi Jeelka. Gayigay Taasi Kajirtaa Saw Ogadenia maha? Gardarro & Guumaysi.
GABANKAAGA SOOQABO: Waa qayb kamid ah Qorshayawga Ethiopia u jeexday Lahaystayaasheeda, Laguna bahdilo Odayada, Ugaasyada, Suldaamada iyo Cuqaasha intaba. Waxaad arkaysaa Aabbe lagu khasbayo inuu soo qabto wiiilkiisa oo kamid ah Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia. Midaas oo kuu cadaynaysa dhinaca kale Xaalwaaga saamaluudka guumaysiga Itobiya inuusan Badali karin Go’aanka Xaqudirirka Ogadenia. Waxaa ka dhacday Gobolka Doollo magaalada Wardheer in la’ isugu Yeedhay Shacabwiynihii kadibna Wiil Tigre ahi, Aabbe Ogadenian ah ku amray inuu soo qabto wiilkiisa oo ah CWXO. Odaygii intuu kacay ayuu ku yidhi ninkii Turjumayay iiga af celi. Waxaadna ku dhahdaa Adiguna Aabahaa ii keen? Ninkii wuu xanaaqay oo wuxuu ku yidhi maxaad ku fali Aabahay? Odaygii ayaa ugu jawabay Waxan ku odhan Wiilkaaga maxaa u keenay Wiilkayga Isagoo Maqale ku dhashay. Iga kaxayso wiilkaygu isagaaba magaalada Iman markuu Kulaabto wiilkaaga dhulkii uu kasoo haajiray. Waxaad halkaa ka Qiyaasi kartaa Cadhada & Diidmada Go’aanka leh ee Ay Qaataan Odayada reer Ogadenia.
Waxkasta oo kor kuxusan waa waxa ogu yar ee Ogadenia ka jira Waana sababaha Ku kalifay inay ONLF u qaado Hubka matashana Shacabka Ogadenia, waxaana U sheegayaa Lahaystayaasha u dhashay Ogadenia ee gumaysiga u shaqeeya hadii Damiirkiina & Caqligiinu idin siiyay inaad U dul qaadataan Bahdilka kala duwan ee noocaas ah, Idinkana tihiin kuwa loo adeegsado shacabkooda aan waxba galabsan, Anagu waan Diidnay waana kasoo horjednaa Dhibaatada & Bahdilka badheedhka ah ee loo gaysan Umadda Soomaalida Ogadenia. Waxaana leenahay No, Maya, Laa.